Home » Travel Technology News » Hongria, Latvia ary Gresy dia manandrana ny mpitsikilo lainga AI handefasana mpitsidika
Mandalo ny fitsapana ny drafitra vatsian'ny EU vola izay hampiasaina ny rafitra mpitsikera mpandainga AI hizahana mpitsangatsangana mety ho dodgy avy any ivelan'ny bloc. Orwellian loatra? Sa ny dingana farany mankany amin'ny dia lavitra?
Manomboka amin'ny 1 Novambra, ny rafitra iBorderCtrl dia hapetraka amin'ny teboka fiampitana sisintany efatra any Hongria, Latvia ary Gresy miaraka amin'ireo firenena ivelan'ny EU. Izy io dia mikendry ny hanamorana ny fiampitana sisintany haingana kokoa ho an'ny mpandeha nefa manaisotra ny mpanao heloka bevava na ny fiampitana tsy ara-dalàna.
Namboarina niaraka tamin'ny famatsiam-bola 5 tapitrisa € avy amin'ny mpiara-miombon'antoka eran'i Eropa, ny tetik'asa mpanamory fiaramanidina dia hiasa amin'ny maso ivoho isaky ny firenena fitsarana ary hotarihin'ny Polisim-pirenena Hongroà.
Ireo izay mampiasa ny rafitra dia tsy maintsy mampakatra antonta antontan-taratasy sasany toy ny pasipaoro, miaraka amina taratasy fangatahana amin'ny Internet, alohan'ny hanombanana ny maso ny sisin-tany virtoaly.
Hijery fakan-tsary fotsiny ilay mpitsangantsangana ary hamaly ireo fanontaniana izay antenaina apetraky ny mpiasan'ny sisin-tany mazoto, hoy ny New Scientist.
“Inona no ao anaty valizinao?” ary “Raha sokafanao ny valizy ary asehoy ahy izay atiny, hanamafy ve izany fa marina ny valinteninao?”
Saingy tsy sahala amin'ny mpiambina sisintany olombelona, ​​ny rafitra AI dia mamakafaka fihetsika bitika kely minitra amin'ny endrik'ilay mpandeha, mitady izay famantarana mety ho lazain'izy ireo lainga.
Raha afa-po amin'ny fikasana marina nataon'ny mpandika izy dia hanome valisoa azy ireo ny iBorderCtrl kaody QR izay mamela azy ireo handeha soa aman-tsara any UE.
Tsy afa-po anefa, ary ny mpandeha dia tsy maintsy mandalo fitiliana biometrika fanampiny toy ny fakana ny dian-tanan-tànana, ny fifandraisan'ny tarehy na ny famakiana lalan-drà. Ny tombana farany dia ataon'ny mpiasa iray.
Tahaka ny teknolojia AI rehetra tamin'ny fahazazany, ny rafitra dia mbola manandramana be ary amin'ny taha-pahombiazana ankehitriny dia 76 isan-jato, tsy hahasakana olona tsy hiampita ny sisintany mandritra ny enim-bolana fitsarana azy io. Saingy ireo mpamolavola ny rafitra dia "matoky tena" fa ny marina dia azo ampitomboina hatrany amin'ny 85 isan-jato amin'ny data vaovao.
Na izany aza, ny ahiahy bebe kokoa dia avy amin'ireo vondrona fahalalahana sivily izay nampitandrina teo aloha momba ny tsy fahatomombanana lehibe hita ao amin'ireo rafitra mifototra amin'ny fianarana milina, indrindra ireo izay mampiasa rindrambaiko hahafantarana endrika.
Tamin'ny volana jolay, ny lohan'ny polisy Metropolitan any Londres dia niatrika fitsapana ny teknolojia famantaran-tarehy mandeha ho azy (AFR) any amin'ny faritra maro ao an-tanàna, na eo aza ny tatitra fa ny rafitra AFR dia nanana taham-panadinana diso 98 isan-jato, hany ka roa fotsiny ny lalao nifanandrinana.
Ny rafitra dia nantsoina hoe "fitaovana fanaraha-maso Orwellian", nataon'ny vondrona fahalalahana sivily, Big Brother Watch.
Horohoron-tany mahery no namely an'i Silia